Baarbara squall: astaamaha, dabaylaha, roobka iyo digniinta | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 18/10/2021 16:00 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
La Barbara Waxay ahayd tii labaad ee loogu magac daray xilli ciyaareedkii 2020-2021. Magaca ay soo jeedisay wakaaladda saadaasha hawada ee gobolka (AEMET) Axaddii, Oktoobar 18 markay ahayd 09:30. Asalkeeda waxaa sabab u ah soo bixitaanka qaar ka mid ah digniinta dabaylaha dabaysha oo ka socda heerka liinta ee ansax ah 20 -ka laga bilaabo 16:00. In kasta oo xilligii ballanta uu weli garan waayay in la soo saaray, haddana saacadihii ugu dambeeyay ee Isniinta wuxuu bilaabay inuu tababar qaato.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato duufaantii Barbara, maxay ahayd xaddiga roobka ay ka tagtay, dabaylaha, iwm.
2 Dabaylaha dabaysha iyo roobka
3 Digniinta iyo digniinta duufaanta Barbara
Intii lagu jiray 20 -kii iyo saacadihii hore ee 21 -kii, duufaantii Barbara waxay ka soo gudubtay Jasiiradda koonfur -galbeed ilaa waqooyi -bari, taasoo ka tagtay roobab aad u tiro badan, gaar ahaan qeybtii galbeed ee nidaamka Dhexe, iyo dabaylo aad u xooggan, xitaa duufaanno, dhulka buuraleyda ah ee Waqooyiga. Waxaa la ogaaday in dhammaadka koonfureed ee xayndaab ballaaran oo ka kooban badweynta Waqooyiga Atlantic durdurka qoyan ee kulaylaha ayaa la quudin jiray. Waa halkaan oo laga sameeyay vortex -ka labaad, kaas oo markii la falgalaya diyaarad polar oo heer sare ah, kicisay duufaanta Barbara.
00 UTC markay ahayd Oktoobar 20 -keedii, bartamaha Barbara waxay ku taallaa wax yar galbeedka Madeira. Maalintii xigtay waxay si xawli ah ugu dhaqaaqday jihada waqooyi -galbeed. 12 -kii duhurnimo waxay joogeen Lisbon 00 21 Oktoobar XNUMX -keedii waxay joogeen Badda Cantabrian. Waxa caadiga ah ee duufaanku waa in xaruntu yeelan doonto cadaadis hoose oo hawo. Xaaladdan, in kasta oo cadaadiska xarunta uusan aad u hooseyn, qiyaastii 990hPa, waxay ahayd daqiiqaddiisii ​​qotodheerta. Heerka cadaadiska xoogga leh ee u adeegay marinkeeda gacanka kadib xarun iyo cadaadisyada sare ee ka jiray Yurub iyo Mediterranean -ka ayaa ahaa waxa sababay dabaylaha xooggan oo leh dabaylo waaweyn.
Dabaylaha dabaysha iyo roobka
Dabaylaha dabaylaha xooggan ayaa xitaa ahaa duufaanno ku jiray koox ka soo duushay Huelva ilaa Pyrenees -ta dhexe. Dhammaan jihooyinkii la xiriiray duufaantii Barbara waxay ka gudubtay dhammaan gacanka gacanka koonfur -galbeed ilaa jihada waqooyi -galbeed. Dhaqdhaqaaq qunyar ah ayuu u socday xagga bari. Sidaa darteed, waxaa ka socday koonfur -galbeed si joogto ah oo xoog leh taas oo door bidday in roobab badan la uruuriyo. Dhaadhacyada koonfureed ee nidaamyada buuraha ee jasiiradda galbeed ayaa ah halka ugu badan ee roobabku ka da'een. Ugu badnaan waxay ka dhacday nidaamka Dhexe. Sababtoo ah roobab badan, ilaa 300 mm 24 saac gudahood. Aagga Mediterranean -ka ee Jasiiradaha Balearic, roobabku ficil ahaan ma lahayn.
Xadka hore ee qabow wuxuu la hadlaa dhammaan Jasiiradaha Canary inta lagu jiro galabnimada Oktoobar 20. Jasiiradaha Canary waxaa ka da’ay roobab aad u weyn, in kastoo ay aad uga qiimo hooseeyaan kuwa lagu qoray gacanka. Intii lagu jiray 21 -kii Barbara wuxuu sii waday inuu si dhaqso leh ugu dhaqaaqo xagga woqooyi, ilaa uu ka midoobo, galabtii maalintaas, oo ay ahayd xarunta ugu weyn ee duufaantii weynayd ee Atlantic ee u dhexaysay Great Britain iyo Badda Waqooyi, markii dambena u socotay Scandinavia. In kasta oo jasiiradaha Spain cadaadisyada hoose iyo roobabka iyo dabayluhu ay sii socdeen, haddana aad uma xoog badna, Waxaa la dhihi karaa saamayntii tooska ahayd ee la xiriirtay Barbara waxay joogsatay saacadihii hore ee 21 -aad.
Roobabka ka da'ay qaybta galbeed ee nidaamka dhexe ayaa si gaar ah u xoogganaa oo muddo dheer jiray. Haddii la tixgeliyo kala -guurka caadiga ah ee cimilada 7 illaa 7 saacadood, 301 mm ee laga diiwaangeliyey Puerto El Pico (Ávila) waxay ka taagan tahay 20 ama 312 mm, oo ah tan ugu weyn taxanaha xilliyada. Garganta la Olla, Hervás, Piornal, Madrigal de la Vera, Hoyos, Tornavacas iyo Valverde del Fresno ee Cáceres kaliya ma jebin rikoorkii ugu badnaa ee roobab urursaday bishii Oktoobar muddo 1 bil ah, laakiin sidoo kale ku dhawaad ​​dhammaantood.
Rikoorka abid labanlaabmay. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray roobab mahiigaan ah, sida 21 litir 10 daqiiqo gudahood El Paso (La Palma), 12 gudaha Alosno (Huelva) iyo 11 Fuente de Cantos (Badajoz).
Digniinta iyo digniinta duufaanta Barbara
Digniin oranji ah ayaa loo soo saaray gusts oo leh xawaare dabayl ka badan 90 ama 110 km / h. Iyada oo ku xidhan gobolka, muddada ansaxnimada duufaanku waxay u dhexaysay Oktoobar 20 iyo 21. Waxay dabooshay ku dhawaad ​​dhammaan aagagga buuraleyda ah ee woqooyiga badhtamaha gacanka, oo ay ku jiraan Sierra de Toledo. Dhammaan nidaamka dhexe, Sierra de Tabria, nidaamka Iberian ee Burgos, Soria iyo La Rioja, galbeedka iyo bartamaha Pyrenees, xarunta Navarra iyo jihada Cantabrian, iyo dhammaan Waddanka Basque (marka laga reebo xeebta).
Nidaamyada dhexe ee Salamanca, Cáceres, Ávila, Segovia iyo Madrid, iyo sidoo kale Buuraha Cantabrian ee León, Zamora iyo Palencia iyo intooda badan, 12 saacadood gudahood waxay aruursadeen roobab ka weyn 80 mm. Heerka digniinta liinta ayaa sidoo kale laga soo saaray Huelva, iyo la -talinta roobka saacad ka badan 30mm ayaa sidoo kale la soo saaray.
Dabayluhu waxay ka mid ahaayeen dadkii dabaylaha watay. Waxaa jiray gulufyo xoog leh oo ku dhowaad dhammaan dhulka oo dhan, oo ka soo baxay galbeedka iyo waqooyiga. Aagagani waxay lahaayeen digniin heer oranji ah oo ka badan 100 km / h. Gulufyada ugu xoogga badan ayaa laga soo saaray buuro dhaadheer, oo xawaaraha dabaylkoodu uu kor u dhaafay 120 km / h habeenkii Talaadada.
Roobkii ugu horreeyay ee la xiriiray nidaamkan cadaadiska hooseeya ayaa durbadiiba ka soo baxay waqooyi -galbeed dhammaadkii Isniintii. Galicia, oo ah barta galbeed ee Castilla y León, iyo aagagga buuraha ah ee Asturias iyo Extremadura ayaa noqon doona aagagga roobabku hore u iman doonaan. Samada cawlan iyo maalmaha roobka culus, hoos u dhaca heerkulka iyo dabayshu waxay abuureen jawi ka sii xun.
Sidaad arki karto, duufaanta Barbara waxay ka mid tahay kuwa, ogeysiis yar, jabiyay diiwaanno muhiim ah. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto duufaantaas iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Squall Barbara